feon'ny hafainganam-pandehan'ny eny amin'ny rivotra
Hafainganam-pandehan'ny feo amin'ny rivotra fanaovana kajy
Calculator feon'ny hafainganam-pandehan'ny eny amin'ny rivotra, online kajy mamela ny kajy ny hafainganam-pandehan'ny feo eny amin'ny rivotra amin'ny samy hafa toy izany mari-pana ao amin'ny vondrona tahaka ny kilometatra, isan'ora, kilaometatra isan'ora, metatra sy ny kilao isan-tsegondra, nodes.
Air mari-pana ao amin'ny:
Celsius Fahrenheit Kelvin Rankin
metatra / faharoa km/H Kilaometatra/H feet/S Fatotra
Ny hafainganam-pandehan'ny feo no nandeha lavitra isan-tarika ny fotoana amin'ny alalan'ny tsy misy kilema onja lasitike propagating alalan'ny fitaovana. Izany dia miankina amin'ny fihenjanan'ny resaoro sy ny hakitroky ny fitaovana: mahazatra, hafainganam-pandehan'ny feo ao amin'ny entona dia latsaka ao amin'ny ranon-javatra, sy ny ranon-javatra - latsaka amin'ny solids.
Speed, fotoana, lavitra,-tserasera kajy.
Kajy (amin'ny aterineto) ny hafainganam-pandeha, fotoana, lavitra sy ny fifampiankinana eo amin'izy ireo.
Orbital velocity rijan fanaovana kajy
Kajy orbital velocity ny planeta ao amin'ny rafi-masoandro, na goavana vatana amin'ny voafaritra bahoaka sy ny rayon.
Afaka velocity rijan fanaovana kajy
Kajy afaka velocity ny planeta ao amin'ny rafi-masoandro, na goavana vatana amin'ny voafaritra bahoaka sy ny rayon.
Newton lalàn'ny hery misinton'ny
Manao kajy ny faobe ny zavatra roa, distanse sy ny hery misintona teo amin'izy ireo, amin'ny alalan'ny fampiasana Newton ny lalàn'ny hery misinton'ny.